သက်ဝေ: တိမ် ပျောက် သူ . . .
Hmoo June 29, 2013 at 12:24 PM
နတ္ထိ June 29, 2013 at 5:28 PM
Thwin June 29, 2013 at 9:32 PM
တိမ်ချစ်သူ မဖြစ်ခင် ကတည်းက အချိန်လေး ပေးပြီး ဂရုစိုက်ခဲ့ ရင် တိမ်တွေ ပျောက် လို့ ငို တဲ့ အဆင့် ဘယ်ရောက်မလဲ..နော်..။ လမ်းကြုံ ရင် တိမ်တွေ ဖမ်းပြီး ပေးပေး ပါ့မယ်..။ တိမ်ပျောက်သူ အတွက်လေ..။
ရေးဖွဲ့ ပုံနှစ်သက်ပြီးသားမို့ ကျေနပ်စွာဖတ်သွားပါတယ်။
အပေါ်ဖက်မှာသူကအရင်တုန်းကနီညိုရောင်တထပ်အိမ်ကလေးထဲမှာမိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ခန့်ညားစွာနေခဲ့တယ်လို့ နားလည်မိတယ်။
အဲဒီတော့လက်ရှိမှာတော့ တခြားနေရာက အခန်းကျဉ်းလေးလို့ နားလည်မိတယ်။ (စိတ်ဝေဒနာဆေးရုံများလားလို့ ..အတွေးဖြန့် ပြီးဆက်ဖတ်ခဲ့တယ်။)
အောက်ဆုံးစာပုိုဒ်မှာနီညိုရောင်အိမ်မှာရှိနေပြန်တော့နဲနဲလယ်သွားလို့သုံးခေါက်ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။
တ်ိမ်တွေကိုပြန်ခေါ်ပေးပါဟု တဖွဖွရေရွတ်ရင်း..အသံတုိုးတုိုးဖြင့်သူရှုိုက်ငိုနေမိပြီဖြစ်သည်။ ….ဆိုတာမှာ….climax…လုို့ ခံစားမိတယ်။
အောက်ဆုံးစာပုိုဒ်ကအုိုင်အုိုရာခံစားနေရတဲ့ …အငြိလေးကို..ပြန်လျှောသွားစေမိတယ်လို့ပါဆင်နယ် ခံစားမှုလေးကို ပေးခဲ့မယ်နော်။
သက်ဝေ June 30, 2013 at 2:11 PM
အန်ကယ်... ကိုနတ်... ညီမ သွင်... မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပါ။
သက်ဝေ June 30, 2013 at 2:16 PM
အမြဲတမ်း စာလာဖတ်ပြီး ခံစားရသလို ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်အတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဆိုလိုချင်တာကတော့ သစ်တောလမ်း အိမ်လေးမှာပါပဲ... မိဘနေရာက အမျိုးသမီးတယောက်အတွက် တအား ပီပီပြင်ပြင်ရေးရမှာ စိတ်ထဲ မကောင်းလှတာနဲ့ စာလုံးတွေ လျှော့လိုက်လို့ အဲလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ရေးပြီးခါစမှာ အိုင်အိုရာ ပြောတဲ့ အဆုံးသတ် (Climax) မှာ ရပ်ထားသေးတယ်... တုံးတိကြီး ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရပြီး နောက်တော့ စိတ်ကူးထဲ ပေါ်လာတာလေးကို ထပ်ဖြည့်လိုက်တာ...
နောက်ကိုလည်း အဲလို မှတ်ချက်မျိုးတွေ ရေးပါနော်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 2, 2013 at 8:06 PM
အစ်မသက်ဝေ ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေရော တစ်ချိန်ချိန်မှာ တိမ်တွေနဲ့ အဖော်ပြုရတဲ့နေ့မျိုး ရောက်မလာဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါ့မလား မသိဘူးလို့ အတွေးဝင်မိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတော့ အဖြူရောင်တိမ်တွေထက် ဘာမှမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးကို ပိုစွဲမက်တယ်.
အဲဒီခါကျရင် တစ်ခန်းလုံးရဲ့ နံရံတွေကို ကောင်းကင်ပြာရောင် ဆေးခြယ်ပစ်မယ်။
နှင်းနဲ့မာယာ July 2, 2013 at 10:34 PM
တကယ့်ကို နူးနူးညံ့ညံ့လေး ရေးပြထားပေမယ့်
ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကို ထိထိမိမိပေးနိုင်တဲ့ စာကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ကြည်ဖြူပိုင် August 10, 2013 at 12:07 AM
Ko Kyaw Oo December 14, 2015 at 8:20 AM
တိ မ်တွေ နှ င့် အ တူ သူ့ ဘ ဝ တ စ် ခု လုံးေ ပျာက် ဆုံးသွား သ လို
နာနာကျ ည်းကျ ည်းခံ စား လို က် ရ သ ည် . . . . . . . . )))